တခါသုံး Mask ကို ပြန်လည် သန့်စင်ပြီး အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ နည်းလမ်း – Let Pan Daily
တခါသုံး Mask ကို ပြန်လည် သန့်စင်ပြီး အသုံးပြု လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေး ပါ…
“MASK နဲ့ ဒဏ်ကြေး”.. အပြင်ထွက်ကြရာ တွင် လူတိုင်း MASK တပ်ဆင်ကြ ရန်နှင့် မတပ်ဆင် ပါက ဒဏ်ကြေးငွေပေးဆောင်ကြ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာချက်တွေ ထွက် လာပါတယ်…
MASK တပ်ဆင်ခြင်းသည် COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှု ကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း အားလုံးက လက်ခံလာချိန်မှာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ လိုက်နာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်…
MASK တပ်ဆင်ဖို့ရာ ငွေရေးကြေးရေးက ပါလာသဖြင့် အခက်အခဲရှိသူများရှိနိုင်ပါတယ်.. MASK မဝယ်နိုင်လို့ ဒဏ်ကြေးကြောက်လို့ MASK တစ်ခုထဲကို လက်ပြောင်းလက်လွှဲ လူအများတပ်ဆင်ခြင်းသည် VIRUS ပိုမိုကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်…
ဆပ်ပြာရေ ဖြန်းစရာဗူး မရှိရင် ဆပ်ပြာရေမှာ ငါးမိနစ်ခန့်စိမ်ခြင်း ရေသန့်သန့်ဖြင့်ဆေးခြင်းနဲ့ အစားထိုးနိုင်ပါတယ်.. ညှစ်ခြင်း ပွတ်တိုက်ခြင်းမပြုပါနဲ.. MASK အသားက ရေစိုစိုမှာ ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်…
သုံးပြီးသား MASK ကိုဆေးကြောမှု မရှိဘဲ အိမ်ထဲမှာဖြစ်သလိုထားခြင်းသည် အိမ်တွင်းနေသူများ ပါဘေးဖြစ်စေပါတယ်…
လှုဒါန်းသူများပိုကုသိုလ်ရစေဖို့ မိမိက ခံနိုင်ရည် ရှိပြီး သေဘေးမကြောက်သော်လည်း မိမိကြောင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကလေးများ ဘေးမဖြစ်ကြစေဖို့ ကူးစက်ပြန့်ပွားလူသားများဒုက္ခမဖြစ်စေဖို့ MASK ကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်သုံးစွဲကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါရစေ…
တခါသုံး Mask ကို ပွနျလညျ သနျ့စငျပွီး အသုံးပွု လို့ရတဲ့ နညျးလမျးလေး ပါ…
“MASK နဲ့ ဒဏျကွေး”.. အပွငျထှကျကွရာ တှငျ လူတိုငျး MASK တပျဆငျကွ ရနျနှငျ့ မတပျဆငျ ပါက ဒဏျကွေးငှပေေးဆောငျကွ ရမညျဖွဈကွောငျး ကွငွောခကျြတှေ ထှကျ လာပါတယျ…
MASK တပျဆငျခွငျးသညျ COVID-19 ရောဂါပွနျ့ပှားမှု ကို ထိထိရောကျရောကျ ကာကှယျနိုငျကွောငျး အားလုံးက လကျခံလာခြိနျမှာ ကိုယျစီကိုယျငှ လိုကျနာကွရမှာဖွဈပါတယျ…
MASK တပျဆငျဖို့ရာ ငှရေေးကွေးရေးက ပါလာသဖွငျ့ အခကျအခဲရှိသူမြားရှိနိုငျပါတယျ.. MASK မဝယျနိုငျလို့ ဒဏျကွေးကွောကျလို့ MASK တဈခုထဲကို လကျပွောငျးလကျလှဲ လူအမြားတပျဆငျခွငျးသညျ VIRUS ပိုမိုကူးစကျပွနျ့ပှားမှုကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ…
MASK လှူဒါနျးမှုမြားမှာ တဈခါသုံး MASK မြားကို အတှမြေ့ား ပါတယျ.. တဈခါသုံး ကိုကွာကွာသုံးနိုငျဖို့ အကွံပွုပါရစေ.. အိမျပွနျရောကျတာနဲ့ အိမျပေါကျဝမှာဘဲ MASK ကိုဖွုတျ ပုံထဲပါတဲ့အတိုငျးအင်ျကြီခြိတျမှာခြိတျ ဆပျပွာရဖွေနျးလိုကျပါ.. ငါးမိနဈလောကျထားပွီး ရသေနျ့သနျ့နဲ့ ဆပျပွာရစေငျအောငျဖွနျးပေးပါ.. သနျ့ရှငျး စငျကွယျသှားတဲ့ အခါ နအေပူခြိနျရ လရေတဲ့နရောမှာ လှနျးထားပါ.. ခွောကျသှသှေ့ားတဲ့အခါ အပေါကျအပွဲ ရှိမရှိစဈဆေးပွီး ကောငျးပါက ဆကျသုံးလို့ရပါပွီ…
ဆပျပွာရေ ဖွနျးစရာဗူး မရှိရငျ ဆပျပွာရမှော ငါးမိနဈခနျ့စိမျခွငျး ရသေနျ့သနျ့ဖွငျ့ဆေးခွငျးနဲ့ အစားထိုးနိုငျပါတယျ.. ညှဈခွငျး ပှတျတိုကျခွငျးမပွုပါနဲ.. MASK အသားက ရစေိုစိုမှာ ပကျြစီးလှယျပါတယျ…
သုံးပွီးသား MASK ကိုဆေးကွောမှု မရှိဘဲ အိမျထဲမှာဖွဈသလိုထားခွငျးသညျ အိမျတှငျးနသေူမြား ပါဘေးဖွဈစပေါတယျ…
လှုဒါနျးသူမြားပိုကုသိုလျရစဖေို့ မိမိက ခံနိုငျရညျ ရှိပွီး သဘေေးမကွောကျသျောလညျး မိမိကွောငျ့သကျကွီးရှယျအိုမြား ကလေးမြား ဘေးမဖွဈကွစဖေို့ ကူးစကျပွနျ့ပှားလူသားမြားဒုက်ခမဖွဈစဖေို့ MASK ကိုစနဈတကတြပျဆငျသုံးစှဲကွပါစို့လို့ တိုကျတှနျးမတ်ေတာရပျခံပါရစေ…
ခြေမထက် ခြေညှိုး ရှည်တဲ့ သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက် မလွှတ်သင့်တာလဲ